Global Voices teny Malagasy · Febroary 2008
Tantara tamin'ny Febroary, 2008
Amerika Avaratra 21 Febroary 2008
Madagasikara : Taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Ivan, ireo takaitra
Madagasikara 20 Febroary 2008
(sary nadika tamin'ny GAZETY_ADALADALA) Efa nandao an'i Madagasikara ankehitriny ny rivodoza Ivan, izay namela tany amin'ireo faritra maro nandalovany haolo sy tsy manan-kialofana aman'arivony maro. Araky ny tarehimarika ofisialy dia olona roa [monja !] no maty ary mahatratra 15'000 kosa ireo tsy manan-kialofana. Raha heverina amin'ny maha sokajy faha-4 ny...
Sierra Leone : Sekoly hoan'i Sierra Leone
Sierra Leone 19 Febroary 2008
Vaovao voarày avy tamin'ny balogin'ny tetikasa Sekoly hoan'i Sierra Leone [School for Sierra Leone] : The Voice of Sierra Leone Association wants to start by supporting a school by buying furniture, toilets and schoolmaterials. After this they plan to build a school and a clinic in an area where there...
Madagasikara : Mandrava ny Rivodoza Ivan
Madagasikara 18 Febroary 2008
Niditra an-tanety tany amin'ny faritra Avaratra Atsinanan'i Madagasikara tamin'ny [alina hifoha] Alahady 17 Febroary 2008 ny rivodoza Ivan, izay rivodoza sokajy faha-4 ankehitriny. (sary nadika tamin'ny meteo france) Na dia efa misy fihatsarana aza ny fiomanan'i Madagasikara hiatrika ny tonon-taonan'ny rivodoza, sady efa nisedra ny kotsan'ireo rivodoza maro ( i...
Israely 17 Febroary 2008
Kôngô-Brazzaville : Fanapariahana ny teny manambara ny zon'ny vahoaka indizeny
Repoblikan'i Kongo 16 Febroary 2008
indigenouspeoplecongobrazza no mitatitra momba ireo ezaka ataon’ Kôngô hanapariahana sy hampahalalana ny mombamomba ny fanambarana vaovao nataon'ny firenena mikambana hoan'ny zon'ny vahoaka indizeny : a été organisé, le 24 Janvier 2008 dernier, un atelier d’information et de réflexion sur les droits des peuples autochtones dans la salle de l’ASU de l’Eglise...
Madagasikara 15 Febroary 2008
Timor atsinanana : Momba ny fahafatesan’i Suharto
Indonezia 02 Febroary 2008
Tamin’ny taona 1975 no nanambaran’i Timor Atsinanana ny fahaleovantenany rehefa nozanahan’i Portiogaly 400 taona. Saingy vao haingana kosa no nahazoany ny fahafahana, noho ny fanafihana sy ny fibodoan’i Indonesia izay nanjaka taminy 24 taona. Tombatombanana ho mihoatra ny 200 000 na ny iray ampahatelon’ny mponina ao an-toerana no maty vokatr’io...
Shina : Ny farihy Xi Hu fotsian'ny orampanala
Shina 02 Febroary 2008
ShaoShilong no manapariaka sary vitsivitsy ahitana ny farihy fanta-daza Xi Hu [farihy Andrefana] fotsian'ny orampanala.